काशी तिवारी ह-त्याकाण्डमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले अभियुक्तलाई बचाउन यसरी दबाब दिनुभयो : तत्कालिन एसपी रमेश खरेल – Wow Sansar
मुख्य पृष्ठ /News/काशी तिवारी ह-त्याकाण्डमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले अभियुक्तलाई बचाउन यसरी दबाब दिनुभयो : तत्कालिन एसपी रमेश खरेल
काशी तिवारी ह-त्याकाण्डमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले अभियुक्तलाई बचाउन यसरी दबाब दिनुभयो : तत्कालिन एसपी रमेश खरेल
काठमाडौं । डिआइजीबाट राजिनामा दिएका रमेश खरेलले काशी तिवारी ह-त्या काण्डमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री एंव जनता समाजवादी पार्टीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईमाथी गम्भिर आरोप लगाउनु भएको छ । उहाले ह-त्या काण्डमा दोषी देखिएका तत्कालिन मन्त्री प्रभु शाहलाई बचाउन बालुवाटारमै बोलाएर दवाव दिएको खुलासा गर्नुभएको हो ।
योहो टेलिभिजनमा पत्रकार जिवराम भण्डारी संगै कुरागर्दै खरेलले घट्ना बारे खुलासा गर्नुभएको हो । अन्तवार्तामा उहाले तत्कालिन आइजिपी रविन्द्रप्रताप शाह, महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानसहितलाई राखेर प्रधानमन्त्री भट्टराईले शाहलाई बचाउन निर्देशन दिनु भएको बताउनु भयो । वीरगञ्ज–१३ मसानघाट शिवपार्वती मन्दिर नजिकै १२ असार २०६७ मा हिन्दु युवा संघका संस्थापक अध्यक्ष तिवारीको ह-त्या भएको थियो । त्यसबेला पर्सा जिल्लाको एसपी खरेल रहनु भएको थियो ।
‘खरेलजी तपाईको इन्भेष्टिगेशनमा कुनै प्रश्न छैन, तपाई इमान्दार पुलिस अफिसर हो, कानुनको नजरमा सबै समान छ भनेर उहा(बाबुराम भट्टराई) ले भन्नुभयो’, त्यसदिन भएको घटना सम्झदै उहाले भन्नुभयो,‘एउटा उपाय निकाल्नुहोस् न त मन्त्री जी लाई बचाउने कुनै उपाय निकाल्नुहोस् न त ।’
२०६८ असार १२ गते साँझ साढे ५ बजे अशोकबाटिकास्थित शिवपार्वती मन्दिर अगाडी गो-ली प्रहार गरी बीरगन्ज –१३ का ४५ बर्षे तिवारीको ह-त्या गरिएको थियो । एमाओवादीले २०६७ बैशाख १८ देखि सुरु गरेको अनिश्चि-तकालिक आमह-ड्ताल हिन्दु युवा संघको बिरोधका कारण सफल हुन नसकेपछि संघका अध्यक्ष तिवारीको ह-त्या भएको थियो । सो दिनको घटना बारे यसो भन्नुहुन्छ खरेल
सगरमाथामा चीनको गतिविधि बढ्यो, फाइभ जी आधार स्टेशन निर्माण
सर्लाहीका कोरोना संक्रमित १४ वर्षीय किशोर भारतबाट आएको खुलासा